MaBridgertons. Kugadziriswa kweiyo Julia Quinn saga | Zvazvino Zvinyorwa
MaBridgertons. Kugadziriswa kwesaga yaJulia Quinn
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Noticias, Romance novel
MaBridgertons izita resaga rekubudirira nhoroondo dzerudo dzenhau yakanyorwa na Julia Quinn. Inovhura pazuva ra Navidad, pasina mubvunzo iro rakakodzera zuva reiyo genre ine huwandu hukuru hwevateveri vanobatana neayo eiyo mazambiringa akatevedzana, zvakare yakashongedzwa. Isu tinotarisa kune izvo zvinovimbisa kuva imwe nyowani nyowani.
2 Bridgertons - Iwo Mabhuku
3 Bridgertons - Iyo Series
Chaizvoizvo, ndiyo pseudonym anonyanya kushandiswa nemunyori weAmerica Julie Cutler, akapedza kudzidza mukati Nhoroondo yeArt neHarvard University, uye izvo zvakatanga ne Medicine paYale. Asi zvaive zvisisina kupera kwaari zvisingatarisirwi uye kubudirira kukuru yenyaya dzake dzerudo dzenhoroondo yechinyakare uye yevakadzi kubata kwenguva. Izvo zvave kutaridzwa semhando ye Yemazuva ano Jane Austen.
Yakatoturikirwa kune anopfuura 25 mitauro, zvakajairika kuve pane zvinyorwa zve mabhuku anotengesa zvakanyanya. Akagamuchirawo mibairo mizhinji, kusanganisira yakati wandei RITA mibayiro, iro rinoreva rerudo genre.
MaBridgertons - Iwo mabhuku
Saga yemhuri yekushandisa, Liwe Bridgerton yakaiswa mune yakasarudzika uye inokwikwidza nyika ye london yakakwira nzanga panguva ye Regency. Isu tinofamba-famba kuburikidza nedzimba dzinopenya dze Mayfair kana dzimba dzeumambo dzepamusoro Park lane, uye zvakateedzana zvinotiratidza izvozvo inonyengera nharaunda yakaoma mitemo uye inoshamisa masimba masimba, uko iyo chitarisiko neunyengeriivo zvese.
Ivo protagonists vane simba bridgerton mhuri, izvo zvinoumba hama sere, imwe neimwe zvakasiyana asi zvakanyanya Kubatana, kuti ivo vanozofanirwa kusunga neaya mahoro nemitambo yekutamba mukutsvaga kwerudo, kushanya uye rudo.
Mabhuku anotiudza idzo nyaya dzerudo dzehama sere, nemazita anoteera arufabheti. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory naHyacinth. Vanogona kuverengwa saizvozvo independiente, asi zvinogara zviripo zvinokurudzirwa tanga na kutanga kubata, kunyanya neavo mavara. Aya ndiwo mazita:
Ndinokupa moyo wangu
Kuna Sir Philip, nerudo
MaBridgertons - Iyo Serie
Inogadzira iyo Netflix, iyo zvakare ine chikwereti chayo kune yakakurumbira nhevedzano yemakore apfuura uye yakanyanya kutaurwa yemhando iyi: Dhorobha Abbey, kunyangwe izvi zvakaiswa mukutanga kwezana ramakumi maviri. Iye anoitangisa pazuva reKisimusi uye kumashure kwayo kune ruoko rwe Shonda Rhimes nekambani yake yekugadzira Shondaland, inoona nezve hukuru hwakakura uye hunogara mukubudirira paterevhizheni se Grey's Anatomy uye chakabva kwachiri Nekunze PRIVIOUSE musangano, O mhosva.
MaBridgertons ivo vanotsigirwa senhema pakati Gossip Girl uye iwo manyorero aJane Austen umo maari zvisingaite rudo, zvinyengeri, mitambo yemhuri hazvisi kushayikwa.
The cast, inova choral, inotungamirwa nevasina kuzivikanwa vatambi vakaita Phoebe dynevor y Regé-Jean Peji, vanoperekedza Golda rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke newton, Luke thompson, Claudia jessie, Nicola coughlan, Ruby kuhukura, Sabrina bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly anofamba, Bessie carter y Harriet Makore. Uye mune yekutanga vhezheni iri Julie Andrews, izvo zvinoisa izwi raLady Whistledown.
MaBridgertons kunotanga Daphne bridgerton (Phoebe Dynevor), mwanasikana wedangwe wemhuri, mukutanga kwake munharaunda yepamusoro. Unoda kutevera mumakwara evabereki vako uye tsvaga rudo rwechokwadi, uye pakutanga tarisiro yavo inoita kunge ine tariro. Asi zvese zvinotanga kupunzika kana a pepanhau rakazara nechisimba pamusoro penhengo zhinji dzenzanga yevakuru vepamusoro. Izvo zvakanyorwa nechakavanzika Mukadzi muridzo muridzo uye zvakare kune makuhwa pamusoro paDaphne.
Asi ipapo iyo Mutongi weHastings (Regé-Jean Peji), inozivikanwa ne rebeldeasiwo anonyanya kudiwa bachelor uye mutengo. Daphne uye iye anosarudza mubatsiri muhondo iri kukura yeungwaru uye dialectics kuyedza kunzvenga izvo zvinotarisirwa nezveramangwana rake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Romance novel » MaBridgertons. Kugadziriswa kwesaga yaJulia Quinn
Ini ndakazoziva iro basa nekutenda kune akateedzana eNetflix, zvakanaka kuti uzive kuti kune zvakare bhuku. Kana iwo akateedzana achitevera rwiyo rwebhuku saka basa rekunyora rinofanirwa kuve rakanakisa.
Paul Coelho mabhuku